Iskaashada caafimaadka: ma awoodna in aan shaqeyno illaa iyo 69 sanno - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nadiifiye ka howl-galaya hosbitaal. Foto: Janerik Henriksson / TT
Iskaashada caafimaadka: ma awoodna in aan shaqeyno illaa iyo 69 sanno
Shaqaalha caafimaadka: ma awoodno in aan sii shaqeyo 69 sanno
Iskaashatada ka howl-gasha xaruumaha caafimaadka Vårdförbundet ayaa si cad uga horyimid qorshe ah in da’da howl-gabka kor loo qaado.
– Vårdförbundet waxay dhaliileysaa hanaanka loo maray hindisahan iyo weliba in ururkeena Vårdförbundet uusan ku jirin ururada balanta galay. Waxaa la leeyahay 12 urur oo waweyn aya wado xoojoodey, waxayn isku afgarteen in kor loo qaado da’da howl-gabka. Balse dood ayaa ka qabnaa, waayo waxaa jiro ururom ka mid ah iskaashato oo arrintan diidan oo aan annaga ka mid nahay, ayey Sineva Ribeiro oo ah guddoomiyaha ururka Vårdförbundet.
Inta badan garabyada suuqa shaqada waxy isla ogalaadeen in kor loo qaado da’da howl-gabka lagu noqdo, sidas waxa horey u shaaciyey hoggaamiyahii hore ee xisbiga KD Göran Hägglund laakiin middas hadda waxaa ka horyimid Sineva Ribeiro oo ah guddoomiyaha iskaashada ka howl-gasha xaruumaha caafimaadka. Waxayna sheegtay in aan yaga lagu marti qaadin kulankas uu ka hadlayo Hägglund ee laysku af-gartay.
Sida uu sheegay Göran Hägglund inta badan garabyada suuqa shaqada waxay ogalyahiin in kor loo qaado da’da lagu noqdo howl-gabka, halka maanta ay tahay ugu horeyn marka la geli karo howl-gab 61 sanno laga dhigiyo 63 iyo xaquuqda qof uu sii shaqeysan karo laga dhigayo 69 halka ay maanta tahay 67 sanno. Ururka iskaashatada ee Uionen ayaa ka mid ah ururada taageersan hindishan lagu kordhinayo da’da howl-gabka.
– Waxaan aaminsanahay isbaddel lagu sameeyo da’da howl-gabka iyo nidaamka howl-gabka in ay tahay lago maarmaan, mark annaga waa soo dhaweyneynaa isbaddel noocas ah. Caqabada maanta waxay tahay haddii xilliga shaqada la kordhiyo sidii ay u noqon laheyd mid wanaagsan, ayuu yeri Henrik Ehrenberg oo dhinaca siyaasdda bulsahda u qaabilsan ururka Unionen.
Laakiin guddoomiyaha urrurka Vårdförbundet Sineva Ribeiro ayaa sheegtay in aysan xubanah ururkan ka mid ah aysan awoodin in ay sii shaqeeyaan haddii la kordhiyo xilliga da’da howl-gabka.
– Xubnaha ururkeena waxay shaqada xaruumaha caafimaadka bilaabaan waqti hore, inta ayb waxbarashada ku jiraan ayey bilaaban in ay ka shaqeeyan goobaha. Haddii xaqiiqada la sheego xubnaha ururkeena ma awoodaan in ay ka sii shaqeeyaan xilli sidas u dheer goobaha caafimaadka, ayey tiri Sineva Ribeiro guddoomiyaha ururka Vårdförbundet.
Da'da howl-gabka oo laysku af-gartey in kor loo qaado